Ukwahlula okudala amaRoma Katolika kunye nama-Orthodox aseMpuma
Ama-Orthodox aseMpuma kunye namaRoma Katolika ziziphumo zento eyaziwa ngokuba yi-East-West Schism (okanye iGreat Schism) yowe-1054, xa ubuKristu bamaxesha aphakathi bohlukana baba ngamasebe amabini.
Ukwahlukana kweByzantine neRoma Katolika kwenzeka xa uPopu Leo III wathwesa uCharlemagne, uKumkani wamaFranks, njengoMlawuli oyiNgcwele waseRoma ngowama-800. Ngokombono waseByzantium, le yayiyimpama kuMlawuli waseMpuma nakubukhosi baseByzantine uqobo - ubukhosi ukumelana nohlaselo lwasemzini kunye nokuxhasa ukholo kwiinkulungwane. Emva kokuba iRoma yawa ngo-476, iByzantium yayikuphela kwento eyayibubukumkani baseRoma.
indlela yokusebenzisa i-nasacort
Isithsaba sikaCharlemagne senza ukuba uMlawuli waseByzantium angabi sahlala, kwaye ubudlelwane phakathi kweMpuma neNtshona bonakala de kwabakho uqhekeko olululo ngo-1054. ICawa yaseMpuma yaba yi-Greek Orthodox Church ngokuqhawula onke amaqhina neRoma kunye neCawa yamaRoma Katolika - ukusuka kupopu ukuya kwi UMlawuli oyiNgcwele waseRoma ezantsi.
Ngaphezulu kweenkulungwane, iBandla laseMpuma kunye neNtshona yecawe baba kude kakhulu kwaye bahlala bodwa ngenxa yezi zizathu zilandelayo:
IJografi: Amazwe aseNtshona ajikeleze iNtshona Yurophu kunye nemimandla esemantla nasentshona yeMeditera kunye neMpuma yathatha iAsia Minor, uMbindi Mpuma, kunye noMntla Afrika.
Ukungazi: Icawa yaseByzantine yayisazi isiLatin esincinci nangaphantsi kwesiko lesiLatin, kwaye ngokuchaseneyo. Uninzi loosolusapho eConstantinople alunakufunda nasiphi na isiLatin, kwaye uninzi loopopu eRoma alunakufunda nasiphi na isiGrike. I-Byzantines eMpuma basebenzise isonka esinegwele kwi-Divine Liturgy yabo ukufuzisela uKrestu Ovukileyo, kwaye amaLatin aseNtshona asebenzisa isonka esingenagwele njengoko sasetyenziswa nguYesu kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela.
Iithiology ezahlukeneyo: Zombini zazisemthethweni, kodwa nganye yayinombono wayo. INtshona (isiLatin) yayisebenza ngakumbi kwaye, nangona inkolelo kubuthixo bukaKristu, gxininisa kubuntu bakhe xa ebonisa uYesu kubugcisa-ngakumbi ngokwenza iminqamlezo eyiyo. IMpuma (iByzantine) yayiyeyona ithiyori kwaye, nangona yayikholelwa ngokupheleleyo kubuntu bukaKristu, yayijolise kubuThixo bakhe, obabunemfihlakalo ngakumbi.
Ubuntu kunye nezopolitiko: UMichael Cerularius, uBhishophu Omkhulu waseConstantinople, noPopu St. Leo IX babengengabo abahlobo, kwaye ngamnye kubo wayengathembani. UCerularius wawela umgca xa wayebhala kwileta ethi ukusetyenziswa kwesiLatini kwezonka ezingenagwele ngamaYuda kodwa hayi ubuKristu. Wayebukhanyela ubunyani be-Eucharist eNgcwele kwiCawa yaseNtshona. U-Leo waphikisa ngelithi oosolusapho babehlala bengonodoli babalawuli baseByzantium.
Ekugqibeleni, uPopu Leo kunye noBhishophu omkhulu uMichael baxothana kunye neecawa zabo. Kodwa ngaphezu kweminyaka engama-900 kamva, ngo-1965, uPopu Paul VI kunye noBhishophu Omkhulu uAthenagoras I waseConstantinople basusa ukunqunyulwa kwabo.
Amasebe obuOthodoki baseMpuma aquka iicawa zaseRuthenian, eUkraine, zamaKatolika aseGrisi, eMelkite, eRomania naseItalo-Albanian Byzantine Churches. Ukongeza kwi-Byzantine, amaKatolika aseMpuma aquka iiMaronite, iCoptic okanye iicawa zamaKatolika zamaKhaledi.
Ngapha koko, ukwahlukana okwahlula iNgqobhoko kanye embindini kusekho unanamhla. Nangona omabini la macala ebamkela ubunyani be-odolo nganye kunye neesakramente, akukho phakathi komthendeleko phakathi kweRoma Katolika kunye ne-Eastern Orthodox. Oko kuthetha ukuba ngokwesiqhelo, amaKatolika avumelekile ukufumana uMthendeleko oNgcwele kwiiCawa zobuOthodoki, ngokuchaseneyo, amaOthodoki akufuneki afumane uMthendeleko oNgcwele kwiiCawe zamaKatolika.
isicwangciso sokutya okuthambileyo
Ngaba i-alprazolam iyafana ne-xanax
yabelana njani ngekhalenda ye-iphone